ओली सरकारको जनता रुवाउने निर्णय, फेरी बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य, लिटरको कति ? — Sanchar Kendra
ओली सरकारको जनता रुवाउने निर्णय, फेरी बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य, लिटरको कति ?
केपी ओली सरकारले जनताको ढाड सक्ने गरी दैनिक उपभोग्य बस्तुमा मुल्यबृद्धि गर्न थालेको छ । सोमबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ ।
सरकारको आदेशमा नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको सोमवार बसेको बैठकले प्रतिलिटर पेट्रोलमा एक रुपैयाँ र डिजेल र मट्टतिेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक सय ६ र डिजेल र मट्टीतेल ८७/८७ रुपैयाँ पुगेको छ । इन्धनको मूल्य भकाभक बढ्न थालेपछि उपभोक्ता भने चिन्तित बनेका छन् ।
उता सिन्डिकेट हटाउन सरकारले चालेको कदमविरुद्ध यातायात व्यवसायीले वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।